श्री मनकामना मन्दिरको दर्सन गरिआज चैत ७ गते शुक्रबार,आजको राशीफल हेर्नुहोस ! तपाईहरूको दिन शुभ रहोस् « Online Tv Nepal
श्री मनकामना मन्दिरको दर्सन गरिआज चैत ७ गते शुक्रबार,आजको राशीफल हेर्नुहोस ! तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्
Published : 20 March, 2020 7:00 am
मेष राशि– सहकर्मी बाट विरोध आउला। लगनशीलताको कमिले गर्दा ठूलो उपलब्धि हातपार्न नसकिएला।मनमा द्विविधा बढ्नेछ । वैदेशिक यात्राको अवसर मिल्नेछ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कार्यहरू पुरा हुनेछन्।
वृष राशि– पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ। मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ। हराउने वा चोरी हुने सम्भावना छ। नियमित खर्चसमेत बढ्ने योग छ।
मिथुन राशि– प्रतिकूल समयले घेरेको छ, संयम रहनु होला। बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्नेछ। अतिथिका रूपमा सम्मान पाइनेछ। इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्।
कर्कट राशि– धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन्। ठुला व्यक्तिले तपाईँका मेहनतको प्रसंसा गर्नेछन्। महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ।
सिंह राशि– संयमता अपनाउँदा राम्रो होला। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सकिनेछ। स्वादिष्ट भोजन पाईनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सकिनेछ। पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ।
कन्या राशि– धर्म कर्म, परोपकार, समाजसेवा जस्ता कार्यमा मन लाग्नेछ। हराउने वा चोरी हुने सम्भावना छ। नियमित खर्चसमेत बढ्ने योग छ। प्रतिकूल समयले घेरेको छ, संयम रहनु होला।
तुला राशि– प्रेममा वियोग हुने योग छ। परिश्रम पनि त्यतिकै गर्नुपर्ने छ। काम सफल भएपनि दिनभर व्यस्तता रहने छ।दिन सोचेजस्तो राम्रो हुने छैन।
वृश्चिक राशि– आफ्नै प्रेमी वा प्रेमिकाका कारण मानप्रतिष्ठामा आँच आउने छ, विवाद बढ्ने छ। बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्नेछ । स्वादिष्ट भोजन पाईनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सकिनेछ। धर्म कर्म, परोपकार, समाजसेवा जस्ता कार्यमा मन लाग्नेछ।
धनु राशि– नयाँ वस्त्र,अलंकारको प्राप्ति हुनेछ। पारिवारिक समस्या आइपर्ला। गरेको काममा ढिलासुस्ती हुनेछ। ताकेका काममा बाधा हुनेछ। नयाँ ठाउँमा आर्थिक लगानी गर्नु उपलब्धीमूलक हुँदैन।
मकर राशि– रमणीय र सुखद यात्राको योग छ। जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ। दैनिक कार्यहरूमा प्रगति हुनेछ। आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुुनेछन्। मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ। रमणीय र सुखद यात्राको योग छ।
कुम्भ राशि– सरकारी कामकाजले तनावै–तनाव झेल्नु पर्ने छ।पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। छर(छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीसाथ काम लिनुपर्ला।अरूको सेवामा मन जाने छ।
मीन राशि– मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ। शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ। नयाँ ठाउँमा आर्थिक लगानी गर्नु उपलब्धीमूलक हुँदैन। ताकेका काममा बाधा हुनेछ। काममा ढिलासुस्ती हुनेछ। पारिवारिक समस्या आइपर्ला। जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कार्यमा अधिक सफलता मिल्नेछ।